jeudi, 25 mars 2021 16:46
jeudi, 25 mars 2021 15:56
Tsy maro kabaro
jeudi, 25 mars 2021 15:47
SAMIFIN : Voatendry ho Tale jeneraly Rajaonarison Mamitiana
Rajaonarison Mamitiana no handimby toerana an’i Boto Tsara Dia Lamina.
jeudi, 25 mars 2021 10:24
Filankevitry ny minisitra : Natao tamin’ny alalan’ny « visioconference »
Natao tamin’ny alalan’ny « visioconference »ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia 24 martsa 2021, ka tany amin’ny toeram-piasany avokoa ireo minisitra no nanatrika tamin’ny alalan’ny fahitalavitra sy antso an-tariby miaraka lamina ara-teknika. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nitarika ny fivoriana ary nahitana ny Praiminisitra sy ireo minisitra isan-tokony.
jeudi, 25 mars 2021 10:02
BNGRC : Voatendry Tale Jeneraly lefitra Razafimanantsoa Mirana Miarimanana
BNGRC : Voatendry Tale Jeneraly lefitra Razafimanantsoa Mirana Miarimanana.
jeudi, 25 mars 2021 09:48
Fiatrehana ny Covid-19 : Homena CVO Plus ny mpitandro ny filaminana
Hanomboka ny alakamisy 25 martsa 2021 ny fizarana ireo CVO Plus natolotra ireo mpitandro ny filaminana noho izy ireo miatrika mivantana ity valanaretina amin’ny fampiharana ireo fepetra isan-tsokajiny raisin’ny fitondram-panjakana. Ireo mpiasan’ny fahasalamana rehetra miatrika ny Covid-19 dia mahazo izany ihany koa, ary ireo sokajin’olona mandray olona dia TSY MAINTSY mampitombo ny hery fiarovana ao anatin’izy ireo amin’ny alalan’ny fandraisana ny CVO Plus.
mercredi, 24 mars 2021 20:58
Fahoriana : Maty Rabehaja-Fils Edmond mpikambana HCC tany aloha
Namoy ny ainy teo amin'ny faha 67 taonany tany Fianarantsoa i Rabehaja-Fils Edmond mpikambana HCC tany aloha, no sady mpampianatra mpikaroka Lalàna tao amin'ny Oniversité n'i Fianarantsoa, ny alahady 21 martsa 2021. Nalevina ny alatsinainy 22 martsa 2021.
mercredi, 24 mars 2021 20:01
Mahajanga : Profesora fahasalamam-bahoaka maty Covid
Avy nampanadina mémoire mpianatra tany Mahanjaga ity profesora momba ny fahasalam-bahoaka ity, professeur de santé publique, no nifindran'ny aretina Covid-19, ary tsy tana ny ainy fa maty.
mercredi, 24 mars 2021 19:04
Antenimieram-pirenena : Voafidy ireo solontena roa eny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana
Notanterahina ny alarobia 24 martsa 2021 teny amin’ny CCI Ivato ny fifidianana ireo solontena roa avy amin’ny Antenimieram-pirenena eny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana. Niisa 14 ireo nirotsaka ho fidiana, koa nolanian’ireo Solombavambahoaka tamin’ny alalan’ny latsa-bato miafina Rasolo Nandrasana Georges Merlin sy Noelson William. 147 ireo Solombavambahoaka tonga nifidy. 71 ny vato no azon-dRasolo Nandrasana Georges Merlin ary 68 ny vato azon’i Noelson William. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 24 mars 2021 19:00
Toamasina : Zandary iray lavon'ny Covid-19
Zandary iray grady, Gendarme principal hors classe, niasa tao SRC Toamasina no nindaosin'ny fahafatesana androany 24 martsa 2021 maraina. Covid-19 no nodirany tao amin'ny hopitaly be nanomboka ny 18 martsa 2021, dia izy lavon'ny aretina izao. Notanterahina androany ihany ny fandevenana azy tao amin'ny cimetière communal.